Ukulandelela okulandelanayo - Ukugeleza kwesenzo kwamakholi, imibhalo kanye nohlelo lwe-imeyili kuzosebenza ukulandela ukuhola ngakunye. I-SalesRep.ai isebenza ngokubambisana nenhlangano yakho ukusetha ukulandelana ngokuya ngokuthi umjikelezo wakho wokuthengisa uku kuphi. Uma ungakaze ukhulume nomholi, kuthathwa izinyathelo ezilandelanayo ezifanele. Uma ulandela kusuka ocingweni olwedlule lokuthengisa kuqalwa okuhlukile. Faka noma iyiphi inqubo yokulandelela edingekayo ku-SalesRep.ai.